Kabaha Valeria: yaa qoray, waa maxay waxa ku saabsan, jilayaasha | Suugaanta hadda jirta
Xaqiiqdii waad maqashay Kabaha Valeria. Waxaad sifiican ula xiriiri kartaa buug ama taxane Netflix ah. Ama labadaba. Sidaa darteed, markan waxaan dooneynaa inaan diirada saarno buuga si aan ugala hadalno waxa aad ka heli karto.
Haddii aadan wali fursad siinin, ama aad isweydiineyso haddii ay mudan tahay in la akhriyo ka dib markaad aragto taxanaha waxqabadka tooska ah, waa tan jawaabta ku saabsan dhibaatadaada.
1 Ayaa wax ku qoray Valeria's kabaha?
2 Waa maxay waxa ku saabsan Valeria's kabaha
4 Maxay yihiin buugaagta kale ee sagaalka ku jira
5 Kabaha Valeria, taxanaha Netflix
6 Maxaa loo akhriyaa riwaayadda
Ayaa wax ku qoray Valeria's kabaha?
Qoraaga iyo nashqadeeyaha Valeria caalamkeeda ayaa ah qoraa Elisabet Benavent. Qoraagan wuxuu ku dhashay 1984 magaalada Valencia wuxuuna wax ku bartay Isgaarsiinta Maqalka ee Jaamacadda Valencia, sidoo kale wuxuu shahaadada Masterka ka qaatay isgaarsiinta iyo farshaxanka ee Complutense University of Madrid. Wuxuu ka shaqeynayay shirkad caalami ah. Si kastaba ha noqotee, tan iyo markii ay yarayd waxay jeclaan jirtay akhriska iyo, sidoo kale, qorista.
Markaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu go'aansaday inuu qabto fikradaha isaga ku dhacay wuxuuna 2013 daabacay sheeko-faneedkii ugu horreeyay: In kabaha Valeria, oo ay raaceen buugaagta intiisa kale ee ka kooban sagaalka.
Waxay iibisay in ka badan 8000000 nuqul oo xitaa buugii ugu horreeyay horeyba loogu waafajiyay taxanaha telefishanka ee ay soo saarto Netflix.
Waa maxay waxa ku saabsan Valeria's kabaha
Kabaha Valeria waxaan kula kulannaa qof weyn, Valeria. Waxay ku jirtaa labaatan jirkeeda, waxayna ku nooshahay magaalo uusan qoraagu u soo qaadin magac, mana xadideyso meel ku meel gaar ah (bil cayiman, sanad, iwm).
Valeria Waxay ka timid Madrid wayna guursatay, laakiin jacaylka ay u dareentay lamaanaheeda, oo ku soo koray yaraantiisii, waxay umuuqataa inuu yaraaday. Iyadu waa qoraa, markaa markay raadineyso alaab sheeko labaad ah, waxay la baxdaa saaxiibbadeed, Nerea, Lola iyo Carmen. Xafladda ayay kula kulantay Victor, labadooduna waxay bilaabeen inay isku xirmaan.
Qorshuhu wuxuu diiradda saari doonaa xiriirkaas ka dhexeeya Víctor iyo Valeria, iyo sida ay tahay inay ula tacaasho xaaladda ay ku nooshahay, maadaama ay xaas tahay, in kasta oo aysan waqti fiican la qaadanayn lammaanaheeda. Dabcan, ha u maleynin in buugga koowaad aad ku ogaan doontid waxa ku dhaca astaamaha, maadaama uu yahay buuggii ugu horreeyay ee taxanaha ah.
Kabaha Valeria waxay ku leedahay jilayaal badan oo aan kuu muujin karno. Laakiin kuwa ugu muhiimsan ayaa ah:
Valeria Jilaaga, haweeney leh dabeecad aad u go'an laakiin, dhab ahaantii, aad ayey uga duwan tahay sida ay u muuqato.
Lola. Ma jeceshahay in loogu yeero Dolores, iyadu waa mid aad u qurux badan, heer sare ah oo hal habeen istaagta.
Carmen. Iyadu waa tan ugu jacaylka badan, riyada badan uguna daacadsan markay tahay wax sheeg.
Neera. Iyadu waa Valeria saaxiibkeeda ugu fiican tan iyo markii ay jirtay 14 sano, aad u qurux badan waxayna ka timid qoys hodan ah. Mararka qaar iyadu waa dambi la’aan waxayna u muuqan kartaa qabow.
Adrian. Waa Valeria ninkeeda, oo aysan hadda xiriir wanaagsan la lahayn.
Víctor. Waa saaxiib Lola, markuu la kulmo Valeria, waxay dareemaan xiriir aad u adag.
Maxay yihiin buugaagta kale ee sagaalka ku jira
Kabaha Valeria kuma lihid buug bilow iyo dhammaad leh, laakiin a sagaal ka kooban afar. Dhammaantood waxay bixiyaan waqti ku-meelgaar ah iyo dhacdooyin isku xigxiga oo ku dhaca astaamaha. Taasi macnaheedu maahan inaad dhammaantood aqriso? Haa iyo maya. Caadi ahaan qoraagu wuxuu uga tegayaa xoogaa xidhan, laakiin waxyaabo badan oo aan la aqoon. Haddii lagugu xiray, waxa ugu ammaansan ayaa ah, ka dib kan ugu horreeya, waxaad ku jiri doontaa saddexda soo socda.
Oo maxay yihiin buugaagtaas? Hagaag:
Kabaha Valeria. Kan ugu horreeya ee sagaalka iyo halka uu kugu soo bandhigayo jilayaasha. Qaarkood waxay yiraahdaan waa kan ugu liita, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxay u adeegtaa soo bandhigid.
Valeria muraayada. Sii wadida wax kasta oo ku dhaca buugga koowaad, iyo horusocod aan kaliya Valeria u aheyn aktarka, laakiin sidoo kale asxaabteeda.
Valeria madow iyo cadaan. Qaybta saddexaad ee ay tahay inuu la kulmo xaqiiqo uusan fileynin, laakiin taasi waxay keenaysaa dareenno is khilaafsan.
Valeria oo qaawan. Dhamaadka sheekada iyo been abuurka sheekada Valeria laakiin, si uun, sidoo kale saaxiibadeed.
Kabaha Valeria, taxanaha Netflix
Sidii aan horey u soo sheegnay, taxanaha 'In Valeria's kabihiisa wuxuu leeyahay la qabsasho taxane ah. Netflix wuxuu ahaa midka helay xuquuqda la qabsiga wuxuuna horey u sii daayay dhowr xilli.
Hadda, kuwii akhriyay buug-yaraha oo ay arkeen silsiladaha ayaa "laga yaabay", maxaa yeelay labaduba waxay leeyihiin qodobo ay wadaagaan, laakiin qaar badan oo aan ahayn sidii ay dhab ahaan ugu dhici jireen mala-awaalka.
Sidaa darteed, haddii aad runtii rabto inaad ogaato waxa dhabta ah ee Valeria, asxaabteeda iyo jilayaal kaleba ay yihiin, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso buugga maxaa yeelay kuuma niyad jabi doono.
Maxaa loo akhriyaa riwaayadda
Ugu dambeyntiina, ma dooneyno inaan ka tagno mowduucan adiga oo aan ku siinin sababo aad ku aqriso Kabaha Valeria, ee ay qortay Elisabet Benavent. Ka sokow taasi waxay ahayd buuggii ugu horreeyay ee uu qoray qoraagan reer Valencian, iyo inay sidaa ku guuleysatay, runta ayaa ah inay jiraan sababo badan oo aad u aqriso, sida xaqiiqda ah inay ka hadlayso mowduucyo muhiim noqon kara, sida dareenka. Xaqiiqda taas ka sheekeeya waaya-aragnimo taas oo lagu aqoonsan karo akhristayaasha, gaar ahaan haweenka akhristayaasha ah, waxay ka dhigtaa jillaab
Intaas waxaa sii dheer, dareenkaasi uma jeedo kaliya lamaanaha, laakiin sidoo kale asxaabta, dhibaatooyinka isku kalsoonaanta, iwm. in, si uun, ay xitaa u kala furi karaan indhaha akhristayaasha si ay u ogaadaan inay jiraan dad ka dhib badan kuwa iyaga ka badan; Ama u arag dhibaatada dhinaca aragtida ah si aad uga baxdo "hagaagsan" halka ay joogaan.
In kasta oo ay tahay in lagu xisaabtamo inay tahay sheeko-curis, iyo in qoraagu arrimahaas kuma milicsana, cod bay siisaa si dadku u dareemaan in lala aqoonsaday jilayaasha iyo xaaladaha buugga lagu sheegay.
Miyaad akhriday Kabaha Valeria? Miyaad fikirkaaga wadaagtaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Kabaha Valeria
Ken Follet: buugaag
Juan José Millás: buugaag